Microsoft သည် Apple Silicon | အတွက် Office update ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ငါ mac ကပါ။
Microsoft သည် Apple Silicon အတွက် Office update ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Jordi Gimenez | | Mac ပရိုဂရမ်များ
၎င်းသည် ၎င်း၏ Office office suite ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို မကြာသေးမီကမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Apple Silicon ပရိုဆက်ဆာများပါရှိသော Apple ကွန်ပျူတာများတွင် Excel အတွက်တရားဝင်ပံ့ပိုးမှု. ဤကိရိယာကို M2 ပရိုဆက်ဆာများနှင့်အတူ Macs တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် Rosetta 1 ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူအများအပြားက စောဒကတက်သည့်အချိန်အကြာတွင် ဤဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Excel ဗားရှင်း 16.57 ၎င်းသည် Macs အားလုံးတွင် မူရင်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် M1, M1 pro သို့မဟုတ် M1 Max ပရိုဆက်ဆာရှိသော ကွန်ပျူတာအသစ်ရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများတွင် လူကြိုက်များသော Microsoft tool ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Excel သည် Apple Silicon ကိုအသုံးပြုထားသော Mac များနှင့် အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်။
ယခု Excel သည် အတွင်းတွင် Apple Silicon CPU ပါရှိသော Macs များနှင့် အပြည့်အဝ လိုက်ဖက်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည် ။ Mac အတွက် Excel ရှိ Power Query ကို ယခုအခါ Apple Silicon ပရိုဆက်ဆာ မော်ဒယ်များအားလုံးတွင် မူလအတိုင်း ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ သင်သည် Excel ကို run ရန် Rosetta emulator ကို ယခင်က သုံးဖူးပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် ၎င်းကို disable လုပ်ပြီး Excel ကို မူရင်းအတိုင်း run နိုင်ပါပြီ။ သင်၏ Mac ပေါ်မှာ
Rosetta2သည် developer များအား Intel ကိုအခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏အက်ပ်လီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာများကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် တီထွင်ဖန်တီးရန် အချိန်ပေးသည့် ယာယီဖြေရှင်းချက်တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း Apple သတိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Arm ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြင့် Macs တွင်လည်ပတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်၊ ၎င်းသည် တိကျသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ သင်သည် ယခု သင်၏ရုံးကို အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ Excel ပရိုဂရမ်သည် သင်၏ Mac အသစ်တွင် မူလအတိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်းအား အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Microsoft သည် Apple Silicon အတွက် Office update ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက ဇာတိမဟုတ်တော့ဘူးလား?
Mac အတွက် Aerial ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စခရင်ခြာများအသစ်ဖြင့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပါသည်။
iPhone 13 ကို Amazon တွင် 819 ယူရိုသာ ရရှိနိုင်သည်။